Buckles Manufacturers & Alaab-qeybiyeyaal - Shiinaha Warshad Buckles
Taabasho Xadhig Taabasho Taabasho Leh Oo Taabasho Leh
Xarkaha sii deynta qaansoleyda ee xoogga leh wuxuu ka samaysan yahay bir caag ah oo tayo sare leh oo wax lagu duro POM. Badeecadu waxay leedahay furitaan caaryadeed oo sax ah, fiiro gaar ah u leh faahfaahinta, qaab dhismeedka wanaagsan, iyo xoogga jiidaha wanaagsan. Ku habboon kabaha, dharka, boorsooyinka, alaabada banaanka iyo warshadaha kale.
Lambarka qaabka: SB017
faahfaahinta: 0.75 * 1 * 1.25 * 1.5 * 2
Noocyada: Xaraashka xaraashka dhinac xoog leh
Astaamaha: Dabacsanaanta wanaagsan iyo xoog jiidaha oo xoog leh
Boorsooyinka Alaabada Boorsada ee Baaskiilka Lagu Sii Daayo
Naqshad badan oo kaamil ah, shaqeyn fiican. Badeecad guntin leh shahaado shati qaran. Ku habboon boorsooyinka safarka, bacaha buuraha, bacaha keydinta, koofiyadaha badbaadada, leasheska xayawaanka, iwm. Adag oo waara, ma fududa in la xidho.
Nambarka qaabka: SB141-B
Noocyada: Xakamaynta sii deynta kooxda ee xoogga leh
Patented Tayo tayo sare leh Baqshad sii daayo
Xadhig leh shahaado patent, tayo sare leh iyo naqshad asal ah, ayaa kuu keeni doona isticmaale ka fiican waayo-aragnimo. Waxay si fiican ugu habboonaan kartaa boorsooyinka dhabarka, boorsooyinka gacanta, dharka, koofiyadaha iyo alaabada kale abuur wax soo saar aad u fiican.
Nambarka qaabka: SB141-A
Badbaadinta Balaastikada Balaastikada POM Xaraashka
Xarkaha bey’ada u roon ee ka samaysan waxyaabo caag ah oo tayo sare leh kuma jiraan waxyaabo waxyeelo u leh jidhka bini’aadamka, waxaana si badbaado leh loogu isticmaali karaa boorsooyinka dhabarka, boorsooyinka safarka, dharka, koofiyadaha iyo waxyaabo kale. Ma aha mid sumaysan mana laha ur gaar ah, weligeedna saameyn kuma yeelan doonto caafimaadka aadanaha.
Nambarka qaabka: SB136
faahfaahinta: 0.75 * 1 * 1.5mm
POM Caag Buckle Bag Qalabka Dharka
Ka sii dhumuc weyn, ka weyn, awood qaadid weyn, dusha siman oo aan lahayn nabarro. Wax soosaarka tayada wanaagsan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si sahlan ku iibsato oo aad ugu raaxaysato. Xulashada ugu fiican ee qalabka iyo dharka. Keeno khibrada ugu fiican ee isticmaale.
Nambarka qaabka: SB134
Tayada Sare ee Buckle Shandado Bag Bag
Xulashada ugu fiican ee alaabada taxanaha ah sida boorsooyinka dhabarka, boorsooyinka, boorsooyinka safarka, koofiyadaha badbaadada, shandadaha, iyo leasheska xayawaanka. Tayo sare, xirasho iska caabin, dabacsanaan weyn iyo xoog is jiidjiidasho xoog leh ayaa ah astaamaheeda.
Nambarka qaabka: SB125
faahfaahinta: 0.75 * 1 * 1.5
POM Tayada Sare Taabashada Gawaarida Gawaarida
Ka samaysan waxyaabo tayo sare leh oo POM ah, oo leh dabacsanaan sare iyo xoog jiidasho xoog leh. Waa mid waara oo aan fududayn da'da. Qaadashada habka wax soo saarka hal-sheyga ah, cidhifyada suunku waa wareegsan yihiin waana siman yihiin iyaga oo aan gacmahaaga dhaawicin. Naqshadeynta qaro weyn ma sahlana in la dhaawaco.
Nambarka qaabka: SB032
POM Xaraashka Ilaalinta Deegaanka
Xiritaanka badbaadada waxaa laga sameeyay qalab tayo sare leh oo POM ah, oo jawi ahaan u fiican oo raagaya, isla markaana aan sahlaneyn in waxyeello loo geysto. Marka la barbardhigo balaastikada caadiga ah, way ka jilicsan tahay oo waxay leedahay noocyo kala duwan oo dhammaystiran oo lagu daboolayo baahiyahaaga kala duwan. Waxay sidoo kale ku siin kartaa adeegyo habaysan si aad u abuurto wax soo saar kuu gaar ah.
Lambarka qaabka: SB015
Xadhig taxane ah oo xoog badan oo xarig ah, dabacsanaan wanaagsan, xoog jiidis xoog leh, xoog leh oo waara, ma fududa in la dhaco, qeexitaannada dhammeystiran, dhumuc iyo wareeg. Ku habboon bacaha buurta, boorsooyinka safarka, koofiyadaha, iwm.
Nambarka qaabka: SB011
Boorsada Boorsada Buushaarka ee Buundada Awoodda leh
Waxay ka samaysan tahay walxaha 'POM' oo leh waxqabad aad u sarreeya. Marka la barbardhigo walxaha caadiga ah ee balaastigga ah, waxay leedahay xoog xoog badan oo jilicsan iyo dabacsanaan ballaaran. Waxay leedahay codsiyo kala duwan, way waari kartaa, mana fududaan da'da. Waxay ku habboon tahay boorsooyinka safarka, shandadaha, boorsooyinka dhabarka, koofiyadaha badbaadada, iwm Noocyada alaabada.
Nambarka qaabka: SB014